A video lee LG G Flex 2 | Gam akporosis
Na mbipụta ikpeazụ nke CES na Las Vegas, LG gosipụtara LG G Flex 2, Kacha ọhụrụ so na ndị Korea na-emeputa curvy ezinụlọ na nke a kwusara dị ka otu n'ime ihe na-adọrọ mmasị na njedebe nke teknụzụ ngosi.
LG ejiriwo mbipụta ikpeazụ nke Mobile World Congress mee ka onye ọhụrụ nke Flex nso, n'ihi ya, anyị ejiriwo ohere ahụ lee vidiyo na LG G Flex 2, ọnụ nwere njiri mara pụrụ iche ma dị egwu. Ga-atụ uche nyocha anyị?
Obere, mma-mma ihuenyo
Ọ bụrụ na G Flex ezighị ezi, ọ bụ nha ihuenyo. 6 sentimita asatọ dị oke oke ma ọ bụrụ na anyị agbakwunye mkpebi 720p na nke ahụ, anyị nwere mmanya mmanya nke na-agwụchaghị. Ọ dị ka LG mụtara ya. Nke ahụ bụ na LG G Flex 2 jikọtara a 5.5-inch Plastic Oled panel nke na-eme mkpebi Full HD.
Gosiputa Gorilla Glass 4 nchedo nke Samsung mere ka odi nma iji ya n’ile ya. Okwesiri ighota na uzo a abughi nani na o nwere ihe nlere oyi, kamakwa awade a ọma ala adịgide, Na mgbakwunye na iguzogide nrụgide, ọ bụrụ na ị nọrọ ọdụ na ekwentị n'akpa uwe gị na mberede, ọ ga-ejide ya na-agbasaghị ihuenyo ya.
na njirimara teknụzụ nke LG G flex 2Dị ka ị pụrụ ịhụ na vidiyo ahụ, ha na-egosi ọnụ ọnụ dị ike, n'ihi Qualcomm Snapdragon 810 SoC.Ọ bụ ezie na anyị enwebeghị ike inyocha ngwaọrụ ahụ nke ọma n'oge ọ bụla anyị chọpụtara na ọ na-ekpo oke ọkụ. Ọ bụ ezie na anyị ga-eche maka nkeji izizi iji kụrụ ahịa iji mara ma Qualcomm's processor nke igwe na-ekpo oke ọkụ.
Kedu ihe ị chere banyere LG G Flex 2?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » MWC 2015: A video lee LG G Flex 2, LG si curved ọnụ